गोरखा १ मा पनि बाम गठबन्धन अगाडि | Ratopati
गोरखा १ मा पनि बाम गठबन्धन अगाडि
personरातोपाटी संवाददाता exploreगोरखा access_timeमंसिर २२, २०७४ chat_bubble_outline0
गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को मतगणना जिल्ला समन्वय समितिमा बिहीबार गर्दै कर्मचारी । यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई र वाम गठबन्धनबाट माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन् । तस्वीर : प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस
गोरखा - गोरखा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १को सुरुवाती मतगणनामा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । सो क्षेत्रमा कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ ४४७२
ल्याउदा माओवादी केन्द्रका हरिराज अधिकारी ४९३४ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ को ‘क’ प्रदेश सभामा कांग्रेसका घिरन थापा २५०७ ल्याएका छन् भने माओवादी केन्द्रका लेख वहादुर थापाले ३८२९ मत ल्याएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ को ‘ख’प्रदेश सभामा कांग्रेसका राजेन्द्र वजगाइँले २४२६ ल्याउँदा एमाले रामशरण वस्नेत ३७९२ ल्याएका छन् ।